Madda Walaabuu Press: Qabsoon Oromoo Eessa Geesse?
Posted by MADDA WALAABUU PRESS on 9/23/2015
Fulbaana 23, 2015 | Ibsaa Guutama Irraa | Gubirmans.com
Dur bara ijoollumaa inna warra saaniif hurraa bu’anii yk horii tiksanii yk dirree keessa taphataa oolanii manatt deebi’an ijoolleen olla toora tokko galanii mataa saanii dugda kan isaan fulduraatt irkisuun harkaan mudhii saa qabatanii deemuu eegalu. Kan duraa hoogganu qofatu waan halle arga. Jarri toora galan sun akkuma lafa ilaalanitt walfaana “Geenyee” jedhu. Kan fulduraa hogganu “Gawuu geenyee” jedha. Utuma akkasiin gaafataa, deebii “gawuu geenye” jedhu argataa deemanii, hoogganni “Geenye” jedha. Ol kahanii yoo laalan ganda gahaniiru. Waa abiddarra jira taanaan manni hin aara. Gorora coccobsaa gammachuun mana ofiitt arreedu. Karaa bu’aa bahiin itt baayyate irra haananii manii saanii gahuu caalaa kan gammachiisu hin turre.